I-Semalt: Indlela Yokuvimbela Zonke Izinhlelo Zokukhangisa Ngamahhala?
Izikhangiso zesiphequluli akuyona nje inkinga kuphela kodwa zibeka ingozi enkulu yokuphepha. Kunemiphumela eminingi yokuziphatha yokuvimbela lezi zikhangiso. Ngokusebenzisa abavimbela izikhangiso kusiphequluli sakho, unquma amaholo walabo abakhokhelwayo, ukuklama, nokuhlinzeka okuqukethwe okuvame ukubheka mahhala. Izikhangiso ozifisa ukuzivimba zifana nazo ezihlinzeka ngemali yokubeka konke okunye ku-intanethi - feather hair fascinators weddings. Noma kunjalo, imvamisa yalezi zikhangiso ekugcineni inganciphisa isipiliyoni sokuphequlula.
UMichael Brown, isikhulu sokumaketha Semalt , unikeza lapha amaphuzu ambalwa okumele akhumbule:
Abavimbeli besikhangiso basemthethweni kakhulu okusho ukuthi abanemingcele. Isinqumo sendlela yokuvimbela izikhangiso sisekelwe kuwe ngokuphelele. Uma ukhetha ukusebenzisa i-Ad Blocker, qiniseka ukuthi ihlanzekile, futhi izokukhonza kahle. Nokho, banokulinganiselwa.
Izimali ze-Ad Blockers zivela enhlanganweni eyodwa noma kumuntu. Ngakho-ke, umuntu kufanele aqhube uphenyo lwakhe enkampanini ngaphambi kokusebenzisa isevisi yakhe. Kumele uqiniseke ukuthi izovimbela ngokusemthethweni zonke izikhangiso isikhathi eside lapho ubhalisele nabo. Kunezimo lapho ubunikazi benkonzo ye-Ad Blocking kuguquka futhi abanikazi abasha bathola amaphrimiyamu kusuka kwezinye izinkampani ukweqa amakheli ad ad.
Ukwengeza isandiso kusiphequluli kuzokwenqabela ukuthi isiphequluli sihlehlise phansi. Noma kunjalo, uma unomshini osebenza kahle, lokhu akufanele kukukhathazeke. Uma kungenjalo, kungadingeka uzivimbele amathebhu amabili noma amathathu ngesikhathi esifanayo.
Izandiso zidinga izibuyekezo eziqhubekayo ezithatha isikhathi sakho esiningi nezinsiza..
Abavimbeli be-Ad abakwazi ukusebenza kahle ngaphandle kokubhaliselwe. Kumele ukhethe uhlu lwamawebhusayithi ofisa ukuwavimbela futhi uwafake ngesandla ohlwini lwabalandeli.
Akunakwenzeka ukuthi usebenzise i-Ad Blocker yomhlaba jikelele uma uqhuba iziphequluli eziningi.
Ngenhlanhla, kunesixazululo esingcono esingabhalwa ngaphandle kokubhaliselwa. Ivimbela izikhangiso zohlelo lonke kuze kube phakade. Akudingi isofthiwe ukuyifaka, okusho ukuthi ngeke ihlehlise uhlelo lwakho.
Faka amafayili asemphathi kusuka ku-MVPS. Iguqulela ama-URL wesiphakeli esikhangayo esaziwayo ngesinhlamvu esingalungile. Uma ikhompyutha izama ukufinyelela ku-intanethi, izobuyisela lokhu okushiwo uhlamvu olungenamkhawulo akulandi ukulanda okuzobe kusindise isikhathi esiningi nezinsiza. Lokhu okulandelayo kuyindlela yokuvimba izikhangiso ngesandla usebenzisa indlela ye-MVPS.
Qinisekisa ukuthi unamalungelo okuphatha. Vula ikhonsoli ethi "Run" ngokucindezela ikhi yamawindi kanye no-R ngesikhathi esifanayo.
Faka "Services.Msc" futhi thola inketho "ye-DNS Client". Chofoza ngakwesokudla kuso bese upheqela phansi ku- "Properties" bese ukhetha "Misa."
Kusukela kumenyu ehlaselwa "uhlobo lokuqalisa", khetha noma "I-Manual" noma "Khutshaziwe." Ochwepheshe batusa inketho Yomqulu.
Sebenzisa izilungiselelo ezintsha bese uqala kabusha.
Faka amafayili amahostela ku- "C: \_ Windows \_ System32 \_ drivers \_ njll" ngezibuyekezo ezibuyekeziwe.
Uma i-anti-virus noma i-windows defender izama ukuthatha isinyathelo ngokumelene nesenzo, yehla.
Manje uyazi ukuthi ungavimbela kanjani izikhangiso ngaphandle kwe-ad blocker noma nini lapho usebenzisa i-intanethi. Qinisekisa ukuthi ubuyekeze amafayili asemphathi njalo bese uwafaka esikhundleni esiqondisweni esibekiwe.